Semalt - कसरी साइबर घोटाला सम्बोधन गर्ने?
होम स्टप, लक्ष्य र अन्य विशाल रिटेलरहरूमा मास्टरकार्डको ब्रेकले शाब्दिक रूपमा सबैलाई असर गरेको छ। सामान्यतया, क्रेडिट उल्ल .्घनको दायरा उपभोक्ताको दायरा भन्दा बाहिरको हुन्छ।
यो जस्तो हुनसक्दछ, घरको निकट निकटको समस्या हामी सबैलाई ईमेलको नियन्त्रण लिन सक्ने स्थितिमा हुन्छ। के अधिक ईमेल सुरक्षा मुद्दाहरू पेरुज ब्रेनको उच्चतम बिन्दुमा छन्। हामीले तपाईंको सुरक्षा मुद्दाहरू र सरोकारहरू अनुरोध गर्‍यौं र धेरै भन्दा धेरै ईमेल सम्बन्धित थिए।
ओलिभर किंग, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, नजिकैका सुरक्षा विशेषज्ञहरूसँग जोडेको छ, जसले पछि के भयो भन्ने खतराबाट रणनीतिक दूरी कायम गर्न को लागी, कल्पनीय फिक्सहरू र सुझावहरूको ज्ञानको साथ प्रतिक्रिया गरे।
विशेषज्ञहरु: ग्रेसन मिलबर्न, ग्रेग फोस, र पॉल माडेन।
ओलिभर किंग: हालसालै विन्डोज installed स्थापना भएको अर्को पीसी खरीद गरियो। त्यस बिन्दुबाट अगाडि, म पदोन्नतिहरूको वर्गीकरणको साथ डुबेकी छु - असाधारण अप्ठ्यारो। यी सन्देशहरूको अधिकतर क्लिक गर्न "सदस्यता रद्द" छनौट गर्दछ। एकचोटि एक पटक, तिनीहरूसँग दुई फरक लिंकहरू छन्। म हरेक दिन सदस्यता रद्द गर्दै छु, जुन महत्वपूर्ण समय लगानी चाहिन्छ, र यस्तै विज्ञापनको एक अंश फिर्ता रहिरहन्छ। के त्यहाँ यो बगहरु डिस्पोजल गर्न एक उत्तम दृष्टिकोण छ?
वेबरुट: स्प्याम सन्देशहरूको विशालमा सदस्यता रद्दको प्रावधान बोगस हो र ह्याकरहरूले प्रयोग गर्न प्रयोग गर्दछ भिन्न गर्नका लागि जब उनीहरूले "लाइभ" ईमेल ठेगाना प्राप्त गर्दछ जसमा स्प्याम बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
LogRhythm: केहि केसहरूमा स्प्यामको डिस्पोजल गर्न असाधारण अप्ठ्यारो हुन सक्छ। व्यापारिकहरूको लागि यो अवैध हो भन्ने तथ्य हुँदाहुँदै तपाईले फिर्ता लिनु भएपछि सन्देश पठाउन जारी राख्नु भयो, केहि यसलाई आवश्यक रूपमा बेवास्ता गर्नुहोस् र कुनै पनि केसमा पत्र पठाउन जारी राख्नुहोस्।
यस स्प्यामलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नको लागि एक आदर्श दृष्टिकोण भनेको अवांछनीय मेलको बहिष्कार गर्नु हो। यो स्वाभाविक रूपमा कुनै ईमेल तपाइँले तिनीहरुलाई तपाइँको फोहोर फोल्डरमा पठाउनुहुन्छ।
ओलिभर किंग: मसँग दुईवटा ईमेल खाताहरू छन्। केही दिन पहिले, मैले स्पष्ट रूपमा मेरो जीमेल रेकर्डमा गलत क्याचमा ट्याप गरें, र अब म सेन्चुरीलिंक खातामा डुब्न लागेको छु स्पटको विस्तृत दायराबाट अवांछनीय प्रचार गर्दै। मैले यो कसरी रोक्ने?
वेबरुट: सन्देशहरू स्पाम वा तपाईंको जीमेल प्रोग्रामबाट जंकको रूपमा लेबल गर्नुहोस्। त्यस्तो गर्नाले तपाइँले प्राप्त गर्नुहुने स्प्यामको संख्या कम गर्न मद्दत गर्दछ।
LogRhythm: यो मध्यम गर्न एक आदर्श दृष्टिकोण फिल्टर प्रयोग गरेर हो। गुगलले कसरी फिल्टरहरू कार्य गर्दछन् र तपाइँ तिनीहरूलाई कसरी समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा शानदार पोस्ट छ।
ओलिभर किंग: भर्खरका महिनाहरूमा मैले रूसी ठेगानाबाट हरेक दिन दुई देखि चार ईमेल सन्देशहरू पाइरहेको छु। म यी सन्देशहरू के हो भनेर महसुस गर्न सक्दछु, तथापि, प्राय जसो आवश्यक तिनीहरूलाई समाप्त हुन चाहान्छ।
वेबरुट: यदि यी सन्देशहरू उस्तै ठेगानाबाट शुरू हुँदैछन् भने, तपाईंसँग त्यो ठेगाना बाधक गर्ने क्षमता छ वा यसलाई फोहोर वा स्पामको रूपमा जाँच गर्नुपर्दछ।
LogRhythm: यस्तो हुन सक्छ कि तपाईंको ईमेल ठेगाना गल्तीले उनीहरूको विनियोजन सूचीमा थपिएको छ। यस स्प्यामलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नको लागि एक आदर्श दृष्टिकोण प्रेषकको ईमेल नाम भएको बहिष्कार गर्नु हो।